Final Table: sida loo aado jadwalka ugu dambeeya ee tartamada turubka
Weligaa ma is weydiisay sida loo aado jadwalka ugu dambeeya ee tartamada turubka? Isku day inaad adeegsatid qaabkan waxaadna ku arki doontaa taas Final Table layaab ma maqnaan doono!
Barnaamijkan cusub waxaan kuugu soo bandhigayaa aalad aad isku daydo inaad aad iyo aad u hesho miiska ugu dambeeya ee tartamada turub-ka internetka siinta waqti adag xitaa xirfadlayaasha dhabta ah!
Final Table: asalka habka
Nidaamkan ciyaarta waxaa dhiirrigeliya habka caanka ah ee David Sklansky.
Haddii aadan aqoon sheekadan, ogow inay wax walba bilaabanayaan maalinta uu ciyaartoygu yahay xisaabyahan David Sklansky, waxaa u yeeray saaxiibkiis, oo leh milkiilayaasha casinos kala duwan ee Las Vegas: wicitaanku wuxuu ahaa in la codsado caawimaad si loo tababaro gabadha maalqabeenka, iyadoo la eegayo tartanka soo socda ee caanka ah ee WSOP (World Series of Poker).
Ma ahayn hawl fudud, oo ka fog! Sklansky wuxuu sidaa go'aansaday inuu abuuro qaab fudud oo dhaqso leh oo wax lagu barto, oo qofkasta raaci karo, oo ku saleysan (ku saleysan miis) kaliya laba ficil oo suurtagal ah: allin ama laab.
Dhammaan faahfaahinta ku saabsan qaabka asalka ah ee Sklansky, waxaan kugu martiqaadayaa inaad sameyso raadinta fudud ee Google.
Qaabka halkan lagu sharaxay, dhanka kale, wuxuu la mid yahay Sklansky kaliya xaqiiqda qirashada (laakiin kaliya qiyaastii 80% kiisaska), labada ficil ayaa horay loo sii sheegay / allin laakiin, sida aan dhawaan arki doono, waxay ku saleysan tahay sababaynta aad u kala duwan.
Caqliga ka dambeeya qaabkani wuxuu u oggolaanayaa kuwa codsada inay tirtiraan xitaa ciyaartoyda ugu fiican, iyaga oo ka reebay ficil ahaan wax kasta oo faa'iido u leh ciyaarta flop post iyo u oggolaanaya xitaa kuwa khibrad yar u leh inay garaacaan ciyaartoyda ugu xirfada badan.
Final Table: Lcaqliga istiraatiijiyadda
Hadafka Final Table, waa tii gaaraan miiska ugu dambeeya ku haray gabi ahaanba celcelis ahaan (celcelis ahaan) oo leh jajabyo iyo wixii ka sarreeya ciyaaro gacmaha sida ugu yar ee suurtogalka ah.
Sababta Sababta waa fududahay: haddii aad leedahay laba aces, waxaad u baahan tahay inaad ogaato in haddii aad gebi ahaanba gasho oo qof kaa soo horjeedaa uu kuugu yeero KK, waxaad leedahay qiyaastii 80% fursad ah inaad guuleysato.
Inaad haysato ixtimaal dhan 80% ah dhinacaaga waa wax weyn, laakiin tani macnaheedu maahan inaad guuleysan doontid 100%, laakiin halkii 80%, taasi waa celcelis ahaan 10-kii jeerba ee ay waxani dhacaan, waad guuleysan doontaa 8 jeer, waana lagaa adkaan doonaa. .
Tartan ahaan, si ka duwan ciyaarta lacagta, luminta allin waxay had iyo jeer la micno tahay in laga takhaluso, sidaa darteed xitaa haddii aad leedahay laba aces, waa inaad ogaataa inaad u baahan tahay inaad lumiso isku celcelis ahaan ugu yaraan mid ka mid ah shantii jeer ee aad la ciyaareyso ciyaaryahan leh wax kale lammaanaha.
Ugu dambayntii markaa, haddii aad ciyaartid waxyar, waxa kale oo aad u dhowdahay inaad la kulanto gacanta kaa soo baxda.
Laakiin waa maxay tirada ugu yar ee gacmaha ee ay tahay inaad ciyaarto si aad ugu soo baxdo jadwalka ugu dambeeya ee tartanka?
Sida loo aado jadwalka ugu dambeeya ee tartamada turubka: itirada labalaabka
Si aan si fiican u fahamno fikradda, aan soo qaadanno tusaale wax ku ool ah: tartan internet ah oo ay ka qaybgalayaan 1.000 ka qaybgalayaal ah iyo 1.500 oo bilaabaya Chips, waxaan lahaan doonnaa celcelis ahaan jajabyada miiska ugu dambeeya (haddii ay ka kooban yihiin 9 ciyaartoy), waxay noqon doonaan (1.000 * 1.500): 9 = 166.666 chips.
Su'aasha muhiimka ahi waxay tahay: Immisa gacmood ayaan ciyaarayaa 'ugu yaraan' si aan u gaadho xayndaabkaas?
Jawaabtu way fududahay: kaliya 7 gacmood (isku dhufasho 1.500 * 2 * 2 ... waxaad ka badan tahay 166.666 7 jeer oo isku-laab ah).
Sida iska cad sababo badan awgood waligaa awood uma yeelan doontid inaad sameysid 7-jeer oo isku xigxig ah iyo dhamaan iskudhafkaaga oo dhan laakiin, sida aad ubogtay, suurtogalnimada ciyaarta iyo sameynta kaliya 7 laba-laab, runtii waad tag miiska ugu dambeeya!
Barnaamijka aan abuuray wuxuu bixiyaa istiraatiijiyad gaar ah oo lagu gaaro himiladaas.
Asal ahaan waxaan xushay gacmo taxane ah oo lagu ciyaaro kaliya allin iyada oo ku saleysan tirada dadka ka soo horjeeda ee firfircoon miiska.
Xulashada ayaa ah tan iyada oo leh Final Table had iyo jeer waxaan leenahay faa'iido tirakoob gaar ah oo aan kaheleyno kuwa naga soo horjeeda, marka loo eego in tirakoob ahaan qofka naga soo horjeeda, ee wacaya allinkeena, uu si joogta ah uga sii xumaan doono faa'iidada, markaa sida iska cad guddiga ayaa ku siin kara waxyaabo la yaab leh ama aan aheyn, laakiin ugu yaraan preflop Waxaan badanaa ku bilaabi doonnaa faa'iido ama khasaaro taasna mustaqbalka fog macnaheedu waa kasbasho!
Sida loo gaadho jadwalka ugu dambeeya ee tartamada turubka: ciyaarta loose ama dhagan?
cunt Final Table maaddaama isku-darkaagu uu hoos u dhacayo sababtoo ah indhoolayaasha la xiriirta celceliska, ciyaartaadu waxay noqoneysaa mid dabacsan (furan), halka haddii aad celcelis ahaan tahay xulashada gacmaha si aad dhammaan ula gasho ay noqonayso mid cidhiidhi ah (ciyaar adag).
Sidoo kale, si ka duwan habka Sklansky, waxaad sidoo kale la ciyaari doontaa xoogaa gacmo ah oo arkaya flop-ka isla markaana go'aaminaya inaad u soo guurto ama aad u laabato si waafaqsan.
In kasta oo ay tahay hab aad u fudud in la raaco, waxaad arki doontaa inay u baahan tahay edbin adag in lagu dabaqo oo aysan sahlaneyn haba yaraatee in aan lagu ibtiloobin qaar ka baxsan sanduuqa, gaar ahaan markaad ku harto jajabyo yar oo laguu adeego qaar ka mid ah gacan muuqata oo hufan laakiin taas oo isla markiiba ka sii xumaan doonta tan ka soo horjeedka soo wici doonta, taasi waa, kaliya ku filan in laga takhaluso.
Halkii ka dhigi lahaa xidhmooyinku inay ka soo baxaan indhoolayaasha illaa dhammaadka, laakiin waligaa ha ku dhaqaaqin dhaqdhaqaaq aan horay loo sii saadaalin Final Table, isku day oo waxaad la kulmi doontaa waxoogaa yaab leh oo la yaab leh!
Sida iska cad mar gaadhay miiska ugu dambeeya waa inaad ka tagtaa habka oo aad u ciyaartaa sida ugu fiican ee aad kartid, adoo og inaad horay u haysatay kursi abaalmarin oo dammaanad leh
Hordhacdan daruuriga ah ka dib, aan ugu dambayntii aragno sida loo isticmaalo barnaamijka.
Sida loo isticmaalo Final Table
Kani waa shaashadda ugu weyn, sidoo kale midka kaliya ee Final Table.
Tiirka bidix wuxuu kujiraa liiska toosan ee gacmaha kaliya ee aad ciyaari karto (laga bilaabo A9 ilaa AA sidaa darteed).
Si aad u isticmaasho barnaamijka, si fudud u qor galkaaga 'dhoobo'markii aan helno mid ka mid ah gacmahan iyo isku celceliska tartanka ee kooxda'CCN', Taas oo si fudud looga heli karo qol kasta oo turub ah adigoo gujinaya guddiga macluumaadka ee tartanka.
Markaad soo gasho xogtan 2, guji badhanka Hubi Weerarka! iyo mid ka mid ah tobanka tiir ee cad ayaa ku iftiimin doona midab kale oo tilmaamaya waxa ficilkaagu noqon doono.
Sidaa darteed haddii aad ku jirto bilowga tartanka adoo haysta 1500 oo isku-celcelis ah celcelis ahaan (AVG) ee tartanku waa 1500 oo aad helaysid KK waxaad u hagaajin doontaa sida soo socota:
haddii adiga ka dib in ka badan 6 ciyaartoy ay qasab tahay inay hadlaan (waxaan ku xusuusinayaa in barnaamijka lagu jaangooyey oo keliya loogu talagalay tartamo miisaska 9 kaqeybgalayaal adigu adiguba) waa inaad laablaabtaa (haa waad saxday, laab KK oo iska iloow);
haddii 6 ama in ka yar ciyaartoy ay tahay inay kuula hadlaan adiga ka dib, dhammaantood dib u dhac ha ku gaabin.
Waa intaas! Isla sidaas oo kale ayaa u socota dhammaan gacmaha kale, kaliya geli galkaaga, celceliska xargaha oo guji badhanka jeegga; iyada oo ku saleysan sadarka iftiimaya, waxaad u akhrin doontaa si siman (ku saleysan tirada ciyaartoyda aan wali hadlin) waxaad u baahan tahay inaad sameyso.
Cont ciyaartoyda firfircoon miiska
Haddii si kadis ah intaan loo jeedin ay horay u jirtay koror ama allin, ciyaartooygan (ama kuwan haddii in ka badan hal), waxaa loo tiriyaa sidii inuu nala hadli doono dabadeena, marka, ku noqoshada tusaalaha kore, haddii aad leedahay KK safka labaadna waa shidan yahay (sida sawirka ku jirta) waxaana jiray kor u kac horteenna ah ka dibna 5 ciyaartoy wali waa inay hadlaan, 5 + 1 = 6 sidaas: Allin!
Haddii halkii ay ahayd isla kiiskii ka hor intaanay jirin kor u qaadis iyo wicitaan iyo markay tahay waqtigeena ka dib markii 5 ciyaartoy ay weli hadli doonaan, waxaan haynaa tan: 1 (kor u qaad) + 1 (wac) + 5 (aan la garanayn) = 7 sidaas darteed 'laab', sida lagu saadaaliyay tiirka labaad ee safka jiifka ah ee gacanta KK.
Hagaag, kani waa qaab soo koobid ah, aan aragno imminka qiimaha kale ee FC iyo M% ee aad ku aragto shaxanka loo adeegsado.
Sida loo aado jadwalka ugu dambeeya ee tartamada turubka: l'M% tilmaame
Qiimaha (aan wax laga badali karin) M% wuxuu muujinayaa boqolkiiba xidhmooyinkaga marka loo eego iskucelceliska tartanka, marka hadii isku darkaagu uu yahay 2.000 oo jajab laakiin celceliska dhamaan ciyaartoyda kale waa 4.000, waxay ka dhigan tahay in M%-kaaga uu noqon doono 50% midka tartanka iyo labalaabku wuxuu noqon doonaa mid deg deg ah sida ugu dhaqsaha badan, dhab ahaantii laga bilaabo 50% hoos, ciyaartaadu waxay ku salaysnaan doontaa sadarka ugu dambeeya ee midig sidaas darteedna waxay noqon doontaa mid 'furfuran' oo aad ufara badan.
Taa bedelkeeda, haddii isku-darkaagu uu yahay 5.000 oo jajab ah celcelis ahaanna ciyaartoyda kale ay yihiin 3.000, qiimaha M% wuxuu noqonayaa 166% safka hore ayaa soo iftiimin doona, taasoo kuu horseedi doonta inaad ciyaarto wax badan, inbadan oo aad u xiran, ama 'aad u adag' .
Final Table: icabbirka FC
Qiimaha FC wuxuu si fudud u micnaheedu yahay 'qodob xaddidan' wuxuuna muujiyaa boqolkiiba saxda ah ee isugeynta hadda (5% inay sax noqoto).
Ujeeddadee u adeegtaa? Markii laguu kala geeyo lammaane hore ayaad u ogayd waxa la samaynayo iyadoo lagu salaynayo qaabka aad taqaan, hase yeeshee labada qof ayaa iyaguna isu rogaya saddex nooc oo mararka qaarkood ah (qiyaastii 12%), sidaa darteed xitaa haddii qaabku sheegayo in la laabo, laakiin la arko foorarka kugu kaco ugu yaraan ama kayar qiimaha ay tilmaamtay isirka FC, qaanuunka ayaa ah inaad wacdo.
Haddii aad ku dhufato saddex nooc nooc ka mid ah flop-ka, isla markiiba waxaad aadeysaa allin (fadlan, wax gaabis ah malaha!) Wax la mid ah haddii aadan xirmin seddex nooc laakiin labadaada lamaane ay ka sarreeyaan saddexda kaar ee flop-ka ku jira (tusaale: adiga waxay leeyihiin laba tobnaad oo flopku wuxuu yimaadaa 2-4-8), kiisaska kale oo dhan waxaad hubinaysaa illaa inta suurtogal laga dhigayo ama hoos loogu laabto sharadka ugu yar ee ka soo horjeedka.
Sida loo aado jadwalka ugu dambeeya ee tartamada turubka: mhalbeega xisaabiyaha
Adoo gujinaya calaamada midabada buluuga / jaallaha ah ee midigta, kalkuleytar yar laakiin faa iido leh ayaa u muuqda ama ku baaba'aaya qeybta hoose ee barnaamijka, taas oo adoo galaya tirada guud ee ciyaartooyda tartanka iyo tirada kuraasta la bixiyay, adigoo gujinaya on badhanka Calc AVG Stack, waxay noqon doontaa Waxaa macquul ah in si sax ah loo ogaado xariijinta si loo gaaro kursi abaalmarin ah iyo xirmada si naloogu ballan qaado kursi miiska ugu dambeeya.
Xogtaani waxay faa iido weyn u yeelan doontaa sameynta istiraatiijiyadyo gaabis ah ka hor inta aysan qarxin masiibada xun, yacni marka ciyaaryahanka ugu dambeeya kahor aaga lacagta la tirtiro.
Habka Final Table halkan ayuu ku egyahay, sax sax? Waxaan kuu xaqiijinayaa inay runti jiraan tiro koobyo badan oo ka dambeeya isla markaana la bilaabayo waxqabadka ugu yar waxaan kuu soo jeedinayaa inaad ku tijaabiso fadhiyada yar yar ee tartamada iyo fadhiyada oo aan ka yarayn 3 miis (27 ciyaartoy) oo si adag u ah 'gaagaaban' nooca.
Tartamada ku habboon istiraatiijiyaddan ayaa ah kuwo iska cad 'kuwo qotodheer' oo leh heerar muddo aad u dheer ah (qaab dhismeed).
Soo Degso Fayl	FinalTable.zip - 1 MB